नयाँ जीवन बिमा कम्पनीले साढे ५ अर्बको आइपीओ जारी गर्दै, कुन् कम्पनीको कति ?
काठमाडौं : नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरुको ५ अर्ब ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आइपीओ आउने भएको छ । ९ वटा नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएसँगै उक्त रकम बराबरको आइपीओ आउन लागेको हो ।
सञ्चालनमा आएका अधिकांश बिमा कम्पनीहरुले वार्षिक साधारण सभाबाट आइपीओ निष्कासन गर्ने निर्णय पारित गरिसकेका छन् । यी जीवन बिमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएको करिब एक वर्ष वितीसक्न लागेको छ । संचालनमा आएको एक वर्ष भित्र यी कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यता, बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब तोकिदिएको छ । यसलाई नै आधार मानेर यी कम्पनीहरुले जारी पुँजी निर्धारण गरेका छन् । जारी पुँजीको न्यूनतम ३०% सेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
यद्यपि, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा बिमा कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्नका लागि आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गरेको एक आर्थिक बर्षको लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका करण यी कम्पनीको आइपीओ निष्कासन ढिलो भएको हो ।
कुन् कम्पनीको कति रुपैयाँ बराबरको आइपीओ ?
जीवन बिमा कम्पनीहरुले जारी पुँजीको ३०% सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्टाएका छन् । ९ नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै जारी पुँजी सिटिजन लाइफको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । इन्सुरेन्सले उक्त पुँजीको ३०% हुन आउने ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ जारी गर्न लागेको हो । हाल यस कम्पनीका संस्थापकबाट १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता भइसकेको छ ।
यता, ज्योति लाइफले ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ जारी गर्न लागेको छ । इन्सुरेन्सको जारी पुँजी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, युनियन लाइफ ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आइपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको छ । कम्पनीको जारी पुँजी २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।